न अर्थ छ न परिभाषा - Janakpur Today
न अर्थ छ न परिभाषा
समाचारपत्र र पत्रिकाहरु लोकतन्त्रकागहनाहुन । सामान्यजनतालेसमाचारपत्र र पत्रिकाहरुबाट कुनै नयाँबिचार र नयाँखबरको आशा राखेका हुन्छन । त्यस्तो बिचार र त्यस्तो खबर, जसले उनीहरुको जीवनमाअलिकतिभएपनिउमंगल्याओस । शरीरमा अलिकतिउर्जा भरोस । परिवारका सदस्यहरुको अनुहारमा अलिकतिआभा देखियोस । हिजोआजगाउँ र शहरमा समाचारपत्र र पत्रिकाको भाषाबुझन पढन लेख्न पर्दैन । गाउँमा समूहमा रहेका एक दुइजनाले पढन लेख्न जाने बाँकी सन्चार आफैं हुन्छ । उदाहरणका लागिपत्रिकागोकर्णजीले पढनुहुन्छ, कुरा सुरथ कुर्मीले बुझ्दछन । शहरबजारको त कुरै नगरे भयो ।समाचारपत्र र महत्वपूर्ण पत्रिकाहरु मानिसहरु निद्राबाट जाग्नु भन्दापहिले नै घरघरका ढोकामापुगी सकेका हुन्छन ।
समाचारपत्र र पत्रिकाहरुले जनताको अपेक्षाअनुसार, सँधै नयाँबिचार र नयाँखबर प्रकाशितगर्नु सम्भव हुँदैन । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट हिजो शनिबार प्रकाशित केही समाचारपत्रकाशिर्षकहरु हेरौं । एउटा समाचारपत्रले नेपालसंग रेलमार्ग जोड्नेतिब्बतकोतिब्र इच्छाको समाचार लेखेकोछ जुनअहिलेको सन्दर्भसंग कतै मिल्दैन । हो, चीनियाँ रेलमाप्रधानमन्त्रीकेपीओलीको तिब्र चासो छ । तर, त्यसले के हुन्छ ?जयनगरबाट जनकपुरहुँदै बिजलपुरा चल्ने रेलको लीक बिछ्याएपनिअहिलेसम्म रेल चल्न सकेको छैन । रेलकहिलेदेखि चल्ने हो ?मानिसमाजान्ने उत्सुकता छ । त्यसबारे समाचारपत्रहरु मौन छन । सरकारले गुठी बिधेयक छलफलका लागि संसदमादर्ता गराएपछि त्यसकाबिरुध्द काठमाडौ र बाहिरका जनताजागेका छन । ठूलाठूला प्रदर्शन भएका छन । प्रा. केदारभक्तमाथेमा जस्ताबौध्दिकब्यक्तित्वले गुठीको परिचयात्मकबिचार अभिब्यक्त गरेकाछन ।
अर्को समाचारपत्रले गुठी बिधेयकको समर्थन र बिरोधमा उठेको दोहोरो आन्दोलनको समाचार दिएकोछ । समाचारपत्रको प्रश्न छ ः गुठी बिधेयकको पक्ष र बिपक्षदुबैखाले आन्दोलन एकैपटक किन उठे ?यसका कारण खोज्न बिधेयकमा प्रस्तावितप्राबधानभित्रै छिर्नुपर्ने हुन्छ । बिधेयकको प्रतिरक्षामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद शान्ता चौधरीले भनेकीछिन्, “बर्षभरि जमीन जोत्ने थारुलाई टाउको लुकाउने बास छैन ।कुतबुझने पुजारीहरु महलमा बस्छन । त्यसैले बिधेयक ठीक छ ।” देशभरका गुठीलाई एकै प्रकृतिको सोचेर सरकारले बिधेयकतयार पारेकोले समस्याजागृत भएको चर्चा छ समाचारमा । समाचारहरुमासरकारले स्थापना गरेको गुठी संस्थानको चर्चा कतै छैन ।त्यो संस्थाअहिले अस्तित्वमा छ कि छैन ?
एउटा समाचारपत्रले बडो सुबिधाजनकहिसावले गुठी बिधेयकसंग सम्बध्दसमस्यालाई चटक्कै बिर्सिएकोछ । सम्भवतः यो उसको भोलिको खाजाहुन सक्दछ । अर्को एउटा समाचारपत्रले जनकपुरधामबाट प्रेषित समाचार प्रकाशित गरेको छ ः गुठी मासे धर्म मर्छ । तर, यो समाचार आन्दोलनसंग जोडिएको छैन । यसको कनेक्सन सर्वोच्च अदालतकोत्यो फैसला संग छ जसमा निर्णय गुठीको पक्षमा छ । अनन्तकालसम्म गुठीमा महन्तबस्ने पाउने नपाउने बिषयमा निर्णयदिने न्यायाधीशहरुले भनेकाछन ः “मठ मन्दिरको सम्पत्तिनाशगर्ने कार्यलाई अदालतले छूटदिन सक्दैन । त्यसो गर्दा धर्म संस्कृति र न्याय मर्न जान्छ । न्यायबिहीन समाजमालोकतन्त्र फष्टाउन सक्दैन ।”
गुठीको समाचारलाई निजी क्षेत्रका समाचारपत्रहरुले आशा गरिएको भन्दाफितलो रुपमा प्रस्तुत गरेका छन भने सरकारी समाचारपत्रहरुको त कुरै भएन । समाचार फितलो हुँदाजतिसुकै गम्भीर बिषयपनिफितलो हुन्छ । सन्चार क्षेत्रको गुण पनियहीहो र दोष पनियहीहो । हाम्रा सन्चार माध्यमहरुमा एजेण्डा स्थापितगर्ने र इस्यू उठाउने जस्ताकामहुँदैनन । तीनिषेधित छन । सरकार, संचार र ब्यापारको सम्बन्धयति निकट र यति घनिष्ट छ कि तीनवटै क्षेत्र आफनो अस्तित्वप्रति संवेदनशील छन । अहिलेको संचार आधा संचार हो । जे छ त्यसैमा चित्तबुझाउनु पर्दछ । बढीको आश र प्यास दुबै हुन्छ ।त्यसकालागि मेहनतले मात्रपुग्दैन । कामगर्नेमानिसकाहातकाहस्तरेखा मेटिइ सकेका हुन्छन ।
सबभन्दा पछिल्लो नाकाबन्दीको समयलाई मधेशले अद्भूत सहनशीलताका साथब्यतीत गर्यो । दमनभयो ।सह्यो ।कतैसंग झुकेन । चुनावभयो ।भोट हाल्नगएको जनताले कसलाई, किन र कसरी भोट हाल्यो ?त्यो सबैलाई थाह छ । आन्दोलनमा सबैभन्दा कष्टकर स्थितिमा रहेको कैलालीको टिकापुर क्षेत्रमाचुनावभयो । जेलमा रहेकाचुनिएकाप्रतिनिधिलाई रातारात संसदमाल्याएर शपथ गराइयो । अहिले निर्वाचित सांसद जेलमा छन । न्यायबिहीन समाजमालोकतन्त्र फष्टाउन सक्दैन भन्दैछन श्रीमानहरु । यो धन्यहो कि होइन?केही अघि देशकाप्रधानमन्त्रीओलीले भनिदिए, “यीप्रदेश र स्थानीयनिकायहरु केन्द्रीय सत्ताकाइकाइहुन ।” सुनेर संविधान पढेका र जानेका नागरिकहरु अलमलमा परे ।संसदमादुइतिहाइको समर्थन पाएर चुनिएकाप्रधानमन्त्री र संबिधानकै कुरा मिलेन । यस्तो बिसंगतअवस्थालाई न्यायमूर्तिका रुपमा रहेका न्यायाधीशहरु के भन्छन ?
नेपालीलोकतन्त्र बिसंगतिपूर्ण अवस्थामा रहेकोछ । २०६३ को परिवर्तनपछि राजनीतिकदलहरुले नयाँपोशाकपहिरेलान, नयाँबिचार ग्रहण गर्लान र नयाँपध्दतिबसाल्लानभन्ने आशा सबैले राखेका थिए । त्यो आशामा छिटै तूषारापातभयो । पार्टीहरुले आफनो चरित्र बदल्न सकेनन । २०६२ मा जस्तो रुप थियो पार्टीको त्यही रुपले निरन्तरतापायो । पध्दतिबन्ने त कुरै भएन, भएकै पध्दतिपनि घाइते भयो ।२०६३ पछि समाजखुलाभयो । त्यहीखुला समाजको कारणले अनेकन बिसंगतआर्थिक अपराधका सृंखलाखुल्दै आए ।
अपराध र अपराधीको पहिचानभयो ।त्यसको निदानभएन । सरकारी खजानादेखि जग्गा–जमीनसम्म, घूस नजराना र मानिसको इमान–जमान समेत बन्दक राखेर पैसा कमाउने प्रबृत्तिमालगामलागेन । अहिले सरकार दुइतिहाइको शक्तिशालीकाँधमा छ, तर सरकार भन्दाबलियातत्व अरु नै देखिएका छन । सामान्यजनता निराश छ । लोकतन्त्रअफरोड छ । कुरामामात्रै समृध्द र सम्पन्न समाजको उल्लेख छ । देश कसरी कुनगन्तब्यमाजाने ? कसैलाई पत्तो छैन । यो अवस्थामा समाचारपत्र र पत्रिकाहरु जे छाप्दैछन त्यसलाई कसरी बेठीक भन्ने ? न बेठीकको अर्थ छ । न ठीकको परिभाषाछ ।यत्तिहो कि दुनियाँजसोतसो चलि रहेको छ ।
जनकपुर टुडे २०७६ असार १ गते-PDF
अंचल अस्पताललाई ‘वाटर डिस्पेन्सरी’ हस्तान्तरण